ဒူဒူကြီး: DCS - Distributed Control System
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မှာ 'PLC နှင့် DCS ဘာကွာခြားလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်' လို့ မေးလာတဲ့အခါ၊ ဖြေကြားဖြစ်တဲ့ post လေးကို ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
'DCS' အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလျှင်၊ Basic Control Theory မှ စပြောဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ Basic Control Theory နဲ့ပက်သက်လို့ ရေးသား ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။ 'PLC' ဟာ controller အမျိုးအစားတခုဖြစ်ပြီး၊ 'DCS' ကတော့ controllers အများအပြားကို networks နဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ၊ communication နဲ့ monitoring အဖြစ် အသုံးပြုထားတဲ့ system လို့ အလွယ်တကူ ပြောနိုင်ပါတယ်။ DCS ကို စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း manufacturing system တွေရဲ့ production line တွေမှာ၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် monitor and control distributed equipment အဖြစ် Electrical power grids and electrical generation plants, Environmental control systems, Traffic signals, Radio signals, Water management systems, Oil refining plants, Metallurgical process plants, Chemical plants, Pharmaceutical manufacturing, Sensor networks အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်း နယ်ပယ်တွေမှာလည်း၊ တတ်ဆင်ကြသလို၊ Dry cargo bulk နဲ့ oil carrier ships ဆိုတဲ့ သဘေ်ာတွေ မှာလည်း၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Distributed Control System
DCS မှာ custom designed ဆိုတဲ့ အသုံးပြုမယ့်သူရဲ့ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အတိုင်း ရေးဆွဲထားတဲ့ processors တွေကို၊ controllers တွေအဖြစ်၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် interconnections နဲ့ communications အတွက်၊ communication protocol အနေနဲ့၊ ရေးဆွဲ သတ်မှတ် အသုံးပြုခြင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ input နဲ့ output modules တွေဟာ DCS ရဲ့ component parts တွေဖြစ်ပါတယ်။ input modules တွေဟာ၊ process သို့မဟုတ် field ထဲမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ input instruments တွေမှ အချက်အလက် information တွေကို၊ လက်ခံရယူပြီး၊ output modules တွေမှတဆင့် field ထဲမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ output instruments တွေသို့၊ transmit instructions တွေ ပြန်လည်ပေးပို့ပါတယ်။ processor တွေကို computer bus သို့မဟုတ် electrical bus တွေ အသုံးပြုကာ ဆက်သွယ်ပြီး၊ modules တခုနဲ့တခုကိုတော့ multiplexer သို့မဟုတ် demultiplexers တွေကို၊ အသုံးပြုကာ ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် central controller နဲ့ distributed controllers တွေ အပါအဝင်၊ HMI လို့ခေါါတဲ့ human–machine interface တနည်းအားဖြင့် control consoles တို့ကိုလည်း bus တွေ အသုံးပြုကာ၊ ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။
DCS ကို switches တွေ, pumps တွေနဲ့ valves တွေကဲ့သို့ physical equipment တွေဖြင့်၊ တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုသလို၊ SCADA system ကဲ့သို့ တဆင့်ခံ intermediate system မှ တဆင့် ချိတ်ဆက်ကာ၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ တခါတရံ DCS နဲ့ SCADA လို့ခေါါတဲ့ supervisory control and data acquisition တို့ကို subtle အနေနဲ့ ရောထွေးတတ်ပါတယ်။ DCS ဟာ control manufacturing processes မှာ တိကျစေဖို့ dedicated system အဖြစ်၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ စနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် batch-oriented လို့ခေါါတဲ့ အဆက်မပြတ် continuous အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်နေရတဲ့ oil refining, petrochemicals, central station power generation, fertilizers, pharmaceuticals, food and beverage manufacturing, cement production, steel making နဲ့ paper making တို့လို၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု manufacturing processes တွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
DCS ကို sensors တွေ၊ actuators တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ၊ plant မှာဖြတ်သန်းသွားမယ့် material ရဲ့ flow control ကို၊ set point control အဖြစ်၊ ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ control loop အတွင်းမှ pressure sensors တွေ controllers တွေနဲ့ control valves တွေကို ချိတ်ဆက်ကာ၊ အသုံးပြုခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ controller မှ signal conditioning input/ output (I/O) device သို့ pressure သို့မဟုတ် flow measurements ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ ဝင်ရောက်လာတဲ့ measured variable ဟာ certain point ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါ၊ controller မှ valve သို့မဟုတ် actuation device အား၊ fluidic flow process ရဲ့ desired set point သို့ရောက်ရှိသည်အထိ၊ အဖွင့်အပိတ် ဆောင်ရွက်စေပါတယ်။ ရေနံချက်စက်ရုံကြီးတွေမှာတော့ အရည်အတွက် ထောင်ချီတဲ့ I/ O points တွေနဲ့ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ DCS တွေကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
စက္ကူစက်ရုံတွေ၊ လည်ပတ်နှုံးအမျိုးမျိုးရရှိစေရန် variable speed drives အမြောက်အများ တတ်ဆင်ထားတဲ့ motor control centers တွေ၊ cement kilns ကဲ့သို့ ဘိလပ်မြေ စက်ရုံတွေနဲ့ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း mining operations မှ သတ္တုထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ် processing facilities တွေ အစရှိတဲ့ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ၊ သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန် ပစ္စည်း products အတွက်၊ သီးသန့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ associated quality အရည်အသွေးကို၊ ထိန်းညှိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် QCS ဆိုတဲ့ quality control system အဖြစ်၊ associated quality အရည်အသွေးအနေနဲ့ ထိန်းညှိထားရန် DCS ကိုအသုံးပြုကြတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သမရိုးကျ typical DCS တွေမှာ၊ အချိတ်အဆက်မိမိ functionally ဒါမှမဟုတ် လိုက်လျှောညီထွေ geographically ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် distributed digital controllers တွေကို၊ networks နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး၊ communication နဲ့ monitoring system အဖြစ် တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
distributed digital controllers တွေကို၊ control box တခုတည်းမှာ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပြီး၊ အရည်အတွက် (၁) ခုမှ (၂၅၆) ခုထက်ပိုတဲ့ control loops တွေကို၊ ထိရောက်စွာ executing အနေနဲ့ regulatory အဖြစ် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ input/ output (I/ O) devices တွေကို controller ဖြင့်အတူတွဲကာ integral အနေနဲ့ တတ်ဆင်ထားတတ်သလို၊ အဝေးတနေရာမှာ remotely အနေနဲ့တတ်ဆင်ထားပြီး၊ field network မှတဆင့် ဆက်သွယ်စေတာကိုလည်း၊ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ controllers အများစုဟာ အချက်အလက်ပေါင်း မြောက်များစွာကို extensive computational capabilities အနေနဲ့ လက်ခံရယူပြီး၊ တချိန်တည်းမှာ transmit instructions တွေ ပြန်လည်ပေးပို့ နိုင်သလို၊ proportional, integral နဲ့ derivative ဆိုတဲ့ PID control ကိုအသုံးပြုကာ၊ အစီအစဉ်တကျ logically and sequentially control အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သာမန် neural networks တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရုံသာမက ရှုပ်ထွေးနက်နဲတဲ့ fuzzy applications တွေ အတွက်ပါ၊ ဆက်သွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ DCS systems တွေမှာ အချက်အလက်တွေနဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေ ပျောက်ကွယ်မသွားနိုင်မယ့် redundant processors တွေကိုသာ အသုံးပြုကြပြီး၊ control system ကို reliability အနေနဲ့ လှိုက်လျှောညီထွေစွာ၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Reference and image credit to : "Introduction to Industrial Control Networks". IEEE Communications Surveys and Tutorials. 2012., Stout, T. M. and Williams, T. J. (1995). "Pioneering Work in the Field of Computer Process Control". IEEE Annals of the History of Computing 17 (1)., http://www.isa.org/
Posted by ကိုထွန်း at 04:33